Horacio. Kuyeuka zvekare zveRoma. 5 yenhetembo dzake | Zvazvino Zvinyorwa
Horacio mumwe wea zvimwe vadetembi vakuru veRoma. A classic pakati zvekare, Shamwari yaVirgilio, uye ane basa rakagadziriswa mune ingangodaro nguva ine mbiri yehumambo. Nhasi afira muRoma mugore ra 8 a. C. Ndinoyeuka chimiro chake na 5 yenhetembo dzake. Chirevo chake, kunakirwa zveipapo, anonyatsopfupikisa chokwadi uye kukosha kwehupenyu hwevanhu.
1.1 Basa rake
Chechipiri Horacio Flaco chaive mwanakomana wemuranda akasunungurwa uye akakwanisa kudzidza muRoma. Akatambirwa ne Brute, mhondi yaKesari, uyo akamutumidza zita mukuru wemauto yeuto rake. Asi yake kusasimba pachinzvimbo chakamudzosera kuRoma, kwaakatanga kushanda se notary, chimwe chinhu chakamupa nguva yekunyora mavhesi. Ipapo akasangana naVirgilio, iyo yakamuzivisa iye mudenderedzwa re Mutariri ndokuchipa kuna mambo Augusto.
Tsika vakomana vana:
Zvigarozvishamiso mifananidzo yenguva yake yakakamurwa kuita mabhuku maviri uye yakanyorwa muma hexameter;
EpodesNhetembo gumi nenomwe dzedingindira rakasiyana uye simba reHellenistic;
Odes (Carmine), zvakare mune hexameter;
Tsamba. Pakati peizvi pane mukurumbira nhetembo art.
Nhetembo yake, kunyanya iyo kukwana muchimiro, inoonekwa seye huwandu hwekunyora kutaura yezvakanaka zvenguva yake.
Carminum I, 11 - kunakirwa zveipapo
Usanyepedzera kuziva, hazvitenderwe,
magumo kuti kwandiri newe, Leucónoe,
kana kubvunza manhamba evaBhabhironi.
Zvirinani kugamuchira izvo zvinouya,
kunyangwe paine zvakawanda zvechando kupfuura Jupiter
akupe, kana kuve wekupedzisira,
iyo iyo yava kugadzira Gungwa reTyrrhenian
kuputsa pakatarisana nemawere.
Usapenga, kusefa waini yako
uye inoenderana neiyo pfupi nzvimbo yehupenyu hwako
Sezvatinotaura, nguva yegodo inotiza.
Rarama nhasi. Capture it.
Usavimba nekusaziva mangwana.
O Venus, mambokadzi weGnidus naPaphos,
siya mudiwa wako Kupro
uye enda kuimba yemhando yepamusoro
yeGlícera, iyo inokumbira iwe
Huya newe Mwana anopisa
uye izvo Nyasha dzedereresa saizi;
vanaNymphs nevechidiki vanouya,
kuti pasina iwe hapana munhu anokwezva;
Carminum III, 25 - Kuna Bacchus
Ndekupi, Bacchus, unondibvisa, uzere newe?
Kune masango api, kumapako api
Ndiri kutsvairwa nepfungwa nyowani here?
Ndichanzwikwa mugomba ripi
kufungisisa kupinza kubwinya kusingaperi
yaKesari anotyisa munyeredzi uye nemusangano
yaJupita? Ndichaimba rakakurumbira, idzva,
zvisina kuimbwa nemuromo.
Hakuna mumwe kunze kwekusaziva Bacchante
akashamiswa achitarisa kubva kumusoro kweHebro,
Thrace chena nechando
Uye iyo Rhodope yakatsikwa netsoka yevatorwa.
saka zvinondifadza, zvakarasika,
kuyemura mahombekombe erwizi nemasango asina vanhu.
O ishe ane simba weNaiads
uye nezve maBacchantes anokwanisa kugogodza pasi
miti yakareba yemadota nemaoko ako!
Hapana chidiki, kana neizwi rekuzvininipisa,
hapana munhu anofa achapembera. Njodzi inotapira
ndiye, o, Leneo, kutevera mwari anosunga tembere dzako
Carminum I, 38 - Kumuranda wake
Ndinovenga, mukomana, pombi yePersia.
Handifarire korona idzodzo
yakarukwa kubva kumashizha e linden.
Regedza kudzingirira nzvimbo
uko ruva rekupedzisira richiri kutumbuka.
Solicitous, ini ndinoedza kusawedzera chero chinhu
kumura wakareruka. Myrtle
zvakakunakira iwe kuti undishandire,
uye ini, chii chandiri kunwa
patsoka dzemuzambiringa mutete.
Carminum I, 23 - Kuna Chloe
Iwe unondidzivirira, Chloe, semhara
iyo inotarisa makomo akatsauka
kuna amai vake vanotya, kwete pasina pasina
kutya mhepo uye mashizha.
Kana iyo hawthorn ikasiya ichivhuvhuta mumhepo,
kana dzvinyu girini richiita kuti zvibhadharise
hupenyu marambule, inzwa kutya,
moyo wake unodedera, nemabvi ake.
Uye zvakadaro handikuteverere
Kufanana neingwe inotyisa kana shumba yeGetullus,
Kukubvarura kuita zvidimbu Ini ndirikuda chete
kuti urege kutevera amai vako,
Haa, wakura zvekutevera murume wako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Horacio. Kuyeuka yekare yeRoma. 5 yenhetembo dzake